Gargaarka Nooca: Xaalada Calaamadeynta | Martech Zone
Gargaarka Nooca: Xaalada Calaamadaha
Jimco, Diisambar 29, 2006 Monday, May 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku dhacay wax weyn post caawa fiidkii ku saabsan Xaaladda Magaca. Ma diidani gabi ahaanba qoraaga, Brad VanAuken, laakiin waxaan doonayay inaan ku daro dhowr qodob. Waxay ahayd dhowr sano tan iyo markii aan si rasmi ah ugu shaqeeyay sidii iyo sidoo kale maareeyayaasha dhinaca, laakiin waxaan rabaa inaan sameeyo qodob muhiim ah oo laga yaabo inuu muuqdo laakiin baahiyo la sheegay.
Intii aan ku jiray warshadaha wargeysyada tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan arkay hoos u dhac sii kordhaya oo ku yimid awoodda lagu xakameynayo ama lagu maamuli karo sumadda. Muuqaal ahaan, weli way iska fududahay… midabada, astaamaha, iyo badeecaddu isma beddelin. Si kastaba ha noqotee, brand sameeyey. Astaanta ayaa dibedda laga beddelay.
Farriintayada iyo aragtideena waxay ahaayeen kuwo iswaafajiya. Si kastaba ha noqotee, dhexdhexaad kaas oo dadku ku heleen brand ayaa naga beddeleysa dadka, iyada oo loo marayo internetka, iyada oo loo marayo dadkeenna la gaarsiinayo, iyada oo loo marayo macaamiisheena adeegga macaamiisha, macaamiisheenna, iyada oo loo marayo tartankeena internetka, iwm.
Waxay ahayd ganacsi sidii caadiga ahayd. Dhammaanteen waan ruxnay oo dhoolla caddeynay oo farta ku taagnay sida ay kuwan dhexdhexaadiyeyaashu u yiraahdeen oo u sameeyeen waxyaabo na baabi'inaya, waxbana ma aannu qaban. Natiija ahaan, astaanta ayaa bilaabatay inay fashilanto - walina way fashilmayaan. Waan arkay, waan qayliyay, oo waxaa lay tusay bixitaan (mahadsanid).
Mararka qaar dhakhsaha kuma eka warshadaha kale, laakiin waxaan ku arkeynaa isbedelkan meel walba. Arrintu waxay tahay in maareeyayaasha sumaddaadu ay wax ka qabanayaan iyo in kale. Sidee maareeyayaashaada summaddu ay si wax ku ool ah ugu gudbinayaan farriinta ay tahay in shirkaddaadu ay isku dayeyso inay u gudbiso macaamiisheeda iyada oo loo marayo dhexdhexaadiyahan cusub? Dhammaan shaqaalahaagu hadda ma garwaaqsanayaan inay maareynayaan sumadda? Iyaga mas'uul ma ka yihiin? Sidee bay ugu tababaran yihiin inay wax ka qabtaan arrintan? Maxay boggooda internetka ka yiraahdaan astaantaada?
Hadda ka cod badan maamulahaaga astaanta waa tayada shirkadda lafteeda. Waxaan aaminsanahay in Mr. VanAuken uu qabto shaqo weyn oo uu ku sharxayo tan. Kordhinta arrinta waa xulasho. Macaamiisha waxay la kulmaan xulashooyin cusub sida ugu dhakhsaha badan markay maqlaan warka xun ee ku saabsan sumaddaada. Xaaladda marka la eego, habeenka kale aniga la dhajiyay ku saabsan Swapagift.com. Ka dib dhajinta, waxaan la kulmay gole ka hadlaya adeegga waxaana helay adeeg kale oo si fiican loo tixraacay… CardAvenue. Daqiiqado gudahood waxaan ka helay badeecad aad u wanaagsan (MA AHAN iyada oo loo marayo suuqgeyn) waxaanan helay shirkad kale oo isla badeecadaas ah (MA u marin suuqgeynta)!
Waa wax lala yaabo sida ugu dhakhsaha badan ee wararka xun u socdaali doonaan tartankuna u soo bixi doono. In ka badan abid, Maamulahaaga Calaamaddu wuxuu u baahan yahay inuu dadaal badan geliyo sidii uu ula xiriiri lahaa gudaha sidii isaga ama iyadu ay dibadda u sameeyaan. Waxay u baahan yihiin inay noqdaan wacdiye iyo tababaraha dhammaan shaqaalahaaga. Adeeggaaga, badeecadaada, iyo inta ugu badanba, dadkaagu waa kuwa kuugu weyn ee dhexdhexaad u ah inay kula xiriiraan astaantaada. Sidee wax u socdaan
Tags: brandIstaraatijiyad sumadayntagobolka sumadda
Microsoft: Fadlan igu darso Liiskaaga Mailing Ferrari
Mahadsanid, Dorion Carroll iyo Technorati!
29, 2006 at 11: 35 AM
Waxaan dareemayaa inaan nasiib badan ahay, ganacsade bilow ah, inaan wax ka bartay isku xirka bulshada iyo is-astamaynta isla bilowgii. Maqaalka aad tixraacday, qoraagu wuxuu ku nuuxnuuxsaday qodobadan: "wacyigelin, marin u helid, qiimeyn, kala duwanaansho ku habboon iyo xiriir dareen leh." Waxaan ka shaqeynayaa sidii aan u garaaci lahaa qodobbadan markii aan korayo. Diiradeydu hadda waa siinta qiimo bilaash ah, si aan u dhiso kalsoonida. Waxaa intaa sii dheer, culeys iguma aha xafiis dowladeed culeys badan. BTW, wax weyn ayaan qabanayaa!
Vince, kaligi taliye, iibiyaha eBay, sida loo qoro.